Yepamusoro-Yekudzvinyirira Sirinji, Yakanyanya Kuchengeta Zvigadzirwa, Musoro weVirusi - Antmed
1mL / 3mL Luer-kukiya Vaccine Syringe
Yakakwira Pressure Syringe yeContrast Media Injector
Antmed Imastar Kusiyanisa Media Injector
Inoraswa Inomanikidza Transducer yevarwere Monitors
Kurapa Kufananidza Zvishongedzo
Multi-shandisa Syringe uye Tube
ANTMED mutungamiriri wemusika wepamba muHigh Pressure Syringe uye Disposable Pressure Transducer indasitiri zvikamu. Isu tinopa imwe-yekumira mhinduro yeCT, MRI uye DSA kusiyanisa midhiya majekiseni, zvinodyiwa uye kumanikidza IV catheters. Zvigadzirwa zvedu zvinotengeswa munyika dzinopfuura zana nenzvimbo dzakaita seAmerica, Europe, Asia, Oceania, uye Africa.
AIyo Chinese indasitiri yezvokurapa indasitiri yagara iri chikamu chinomhanya-mhanya uye yave kutaridzwa semusika wechipiri mukurusa wehutano hwepasi rose. Icho chikonzero chekukura nekukurumidza ndechekuti kuwedzera kuri kuita kwehutano mune yekurapa mudziyo, mishonga, chipatara uye hutano-hutano inishuwarenzi. Kunze ...
Indasitiri yechiChinese yezvigadzirwa zvekurapa yagara iri chikamu chinomhanya-mhanya uye yave kutariswa semusika wechipiri mukurusa wezvehutano munyika. Icho chikonzero chekukura nekukurumidza ndechekuti kuwedzera kuri kuita kwehutano mune yekurapa mudziyo, mishonga, chipatara uye hutano-hutano inishuwarenzi. Kunze ...
Musiyano uripo pakati peyeraki-rakakiiwa sirinji uye neru-slip sirinji